“ka Calanka Somalia qaatay ee u heesay sharci qabanayaa ma jiro” Faysal C.waraabe | Berberanews.com
Home WARARKA “ka Calanka Somalia qaatay ee u heesay sharci qabanayaa ma jiro” Faysal...
“ka Calanka Somalia qaatay ee u heesay sharci qabanayaa ma jiro” Faysal C.waraabe
“Somaliland dambas baynu ka soo dhex saarnay”
“Guri uu ina dejiyay ina Cigaal baynu fadhinaa”
Hargeysa-(Berberanews)-Guddoomiya Xisbiga UCID Eng. Faysal Cali Waraabe, ayaa uga digay Mudanayaasha cusub ee Golaha wakiilladu inay maraan jidkii lagu hungoobay ee Baarlamaankii ka horeeyay.
Eng. Faysal wuxuu ku sifeeyay Baarlamaankii hore kuwo muddo 15 sano ah fadhiyay oo ceeb u soo jiiday Somaliland “15 sano oo aanay waxba qaban dadka masaakiinta ah cashuurtooda ay mushahar u qaadanayeen oo ceeb inoo soo jiiday” ayuu yidhi Eng Faysal oo ka hadlay xaflad loo sameeyay isbahaysigii mucaaridka ee Waddani iyo UCID.
Eng Faysal Cali Waraabe waxaa uu ka hadlay arrimo badan, sida doorashooyinkii, diiwaangelintii, isbabaysiga xisbiyada iyo guuldarradii isbahaysigii 2005 ee UCID iyo KULMIYE.
Doorashada iyo Diiwaangelinta
Waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa ilaahay inoo suurtageliyay dooraashadii nabadda ku dhacday iyo diiwaangelintii dalkeena markii u horraysay dhul aanay ka dhicin ay ka dhacday iyo doorashadii ahayd mid loo dhanyahay oo rag iyo dumarba ay ka qaybgaleen iyo beelaha laga tirada badanyahay.
Waxay doorashadaasi inoo keentay magac iyo maamuus aduunka, shacbiga Somaliland-na niyad ka burburtay u soo noolaysay.
Isbahaysiga Labada Xisbi
Arrintaa aanu samaynay ee labada xisbi ee isbahaysigu waan iska caado mar hadduu xisbi gaadhi waayo aqlabiyaddii uu ku qaadan lahaa hoggaanka Baarlamaanka waa qasab markaa inay laba isku tagaan .
2005tii rayigaas ayaanu keenay haddaanu UCID nahay oo Kulmiye ayaanu la bahownay sababtii aanu u samaynayna waa tan maanta jirta.
Qoomamadii laga dhaxlay Isbahaysigii 2005
Waxaa nasiib darro ah isbahaysigaa aanu samaynay iyo shirguddoonkaa aanu qabsanay sidii aanu ugu tallogalay umuu shaqayn waayo wixii aan ka hadlayay in la hagaajiyo 2005 lama hagaajin, waxaa inagaga daran weliba shantii sano markay ka dhamaatay wuu ka tegay golahaasi gole umadeed oo danaystayaal bay soo baxeen oo 15 sano oo aanay waxba qaban dadka masaakiinta ah cashuurtooda ay mushahar u qaadanayeen oo ceeb inoo soo jiiday oo la baxay Baarlamaankii aduunka ugu tamarta yaraa uguna cimri dheeraa ayuu noqday, horta Ilaahay waxaan ka baryayaa inaanu kiiyoo kale ka dhigin.
Somaliland hadaan nahay horta Jabad (guri) ayaynu fadhinaa uu ina dejiyay Maxamed Xaaji Ibraahin Cigaal Ilaahay haw naxariistee oo Hay’adahaa shaqaynaya maanta inoo dhisay oo sidaa Cabdiqaadir ka sheekeeyay Baarlamaanku inuu cidlo fadhiyay oo dalkoo dhan baa caynkaa ahaa oo Hay’ad qudha oo inoo dhisnayd ma hayn, wasaaraduhu ma haysan, xafiisyadu ma haysan, qalab ma haysan, Somaliland dambas baynu ka soo dhex saarnay, qaran burburay oo baaba’ay, Carruirteena waa ogaydeen waxay ku fadhiyi jireen caano boodhaha maantana Alxamdulilaa meel fiican baynu maraynaa.
Caawadaa aan joogno Xamar waxa ka socda doorashadii aqalka sare iyo Aqalka hoose ee Somaliland, inay dadku waalanyihiin baan idiin sheegayaa horta laynoo geeyee bal dadkan caga badnaanteenu inoo geysay lixdankii waa caqligaa maanta ku leh ‘Guddidii doorashooyinka Somaliland aqalka sare iyo aqalka hoose ayaa la samaynayaa bisha todobadeeda. Waxaa weeye inagaa waxaa ugu wacan.
Sharcigii Maraykanku soo saaray 1799kii
1799 ayuu maraykanku soo saaray sharci ka mamnuucaya oo dembi ka dhigaya qof muwaadina oo Maraykani inuu waddan kale heshiis la galo, inagana inagoo intaa jirnay ayaa ilaa 200dii shirkii Carta lagu qabtay inay qaar ina sheegtaanoo magaceena heshiisyo ku galaan. Taasi waxay ku tusaysaa in tamar aynu ku samayno sharci aaanay jirin. Waxaan leeyahay boqolkiiba 75 waa in dowladu soo saarto sharciyada ay dalka ku xukumayso baarlamaankuna uu ka eego. Dowladu waxba soo saari weydee hawshaasi idinkay idin haysataa. Sharci aynu maanta leenahay kaa calanka Somalia qaatay ee u heesay sharci qabanayaa ma jiro oo aynu u samaynay; kii nabadgelyadaan jirin; kii magac dilkaan jirin; kii isku dirkaan jirin oo masaajidada qaar baad aragteen oo isku dir umadeed aanay ka soo baxayn; cuqaashii baa aragteen oo beel beel caayaysa waxaasoo dhami in sharci laga soo saaray u baahantahay, waxaan leeyahay sharciyo hala soo saaro dalka lagu hoggaamiyo idinkuna sharciga ilaaliya.
Muxuu ka yidhi Cabdirisaaq Khaliif?
Cabdirisaaq waa ku kalsoonahay, dad badan oo reer Sool ka hor taagnaa Somaliland ayaa inoogu jiray Baarlamanka oo albaabka ka baxay, shalay Cali Khaliif heshiis la’aan kumuu dhinteen haduu cabdirisaaq yahay guddoomiyaha Baarlamaanka, inagoo Khaatumo dhamaynay arrinkeeda ayuu jannada geli lahaa, maantana waad ogtihiin oo Laascaanood oon weligeed laga dabaaldegin ayaa laga dabaldegay; khudnaddiisii bay ku jirtay ‘Somaliland iyo deegaankaygu way kala go’anyihiin oo waa isku soo xidhayaa’ wuxuu aas aasay seeskii insha alaa wuu dhamaystiri doonaa.
Previous articleKornayl Caarre oo sheegay inuu furanayo urur siyaasadeed